Umzekelo woLwakhiwo lukaDeat Dot - I-Octet Rule Exception
I-Octet Rule Exception
Izakhiwo ze-Lewis zinobuchule ukuchaza kwangaphambili i-geometry ye-molecule. Ngamanye amaxesha, enye yee-athomu kwi-molecule ayilandelanga umthetho we- octet ngokulungiselela iimbondi ze-electron zijikeleze i-athomu. Lo mzekelo usebenzisa amanyathelo achazwe kwindlela yokudweba isakhiwo seLatta ukudweba isakhiwo seLee ye-molecule apho i-athomu enye ibingummiselo olawulo lwe -octet .
Dweba i-Lewis isakhiwo se-molecule nge-molecular formula ICl 3 .
Inyathelo 1: Fumana inani elipheleleyo lee-electron.
Iodine ine-electrion 7
I-klorine ine-electrion 7
Iimvolonti zepalence ezipheleleyo = iodine 1 (7) + 3 i-klorine (3 x 7)
Iimpawu zeselectrion ezipheleleyo = 7 + 21
Iimpahla zombane zepalence = 28
Inyathelo 2: Fumana inani lama-electron afunekayo ukwenza iathothi "ijolise"
Iodine idinga i-8 valence
I-klorine idinga ii-8 ze-valence
I-valence iyonke i-valence "iyavuya" = i-iodine 1 (8) + 3 i-klorine (3 x 8)
Iifowuni zepalence zizonke "ziyavuya" = 8 + 24
I-valence iyonke i-valence "iyavuya" = 32
Inyathelo lesi-3: Misela inani leebhondi kwi-molecule.
inani leebhondi = (Isinyathelo 2 - Isinyathelo 1) / 2
inani lamabhondi = (32 - 28) / 2
inani leebhondi = 4/2
inani leebhondi = 2
Yiyo ndlela yokuchonga umzekelo kwi-octet . Akukho zibophelelo ezaneleyo kwinani lee-athomu kwi-molecule. I-ICl 3 kufuneka ibe neebhondi ezintathu ukubopha ii-athomu ezine. Inyathelo 4: Khetha i-atom ephakathi.
Ii-Halogens zidla ngokuba ngama-athomu angaphandle kwe-molecule. Kule meko, zonke ii-athomu zi-halogens. Iodine yinto encinci ye-electronegative yezinto ezimbini. Sebenzisa iodine njenge-atom yeziko .
Inyathelo 5: Dweba isakhiwo samathambo .
Ekubeni singenazo iimbopheleleko ezaneleyo zokudibanisa zonke ii-athomu ezine, zidibanisa i-atom ephakathi kwezinye ezintathu kunye nezibophelelo ezintathu.
Inyathelo 6: Beka ii-electron kwii-atom ngaphandle.
Gcwalisa ii-octet ezijikeleze i-atylorine. I-chlorine nganye kufuneka ifumane iitronta ezintandathu ukuzalisa ii-octet zazo.
Inyathelo lesi-7: Beka i-elektrononi eseleyo kwi-atom ephakathi.
Beka ii-electron ezine ezisezantsi kwi-atom ye-ididi ukugqiba isakhiwo. Isakhiwo esipheleleyo sibonakala ekuqaleni komzekelo.
I-Cyanide Ibulala Kanjani? I-Chemistry ye-Cyanide Poisoning
5 Imizekelo yeMicrosoft Suspensions
Amagama ama-10 awona maDorsa Worms
Ukuhlanganiswa kweliVumelwano "amandla"
Ngenxa kaWin-Dixie nguKate DiCamillo
Funda indlela yokusebenzisa iNgqungquthela yamaFrentshi "Par"
Ngaba i-Ectoplasm Real okanye Inkohliso?
Igama 10 Iintlobo zamandla
Izikhokelo zokusebenzisa i-Semicolons, Colons, kunye neDashes
Iiping-Pong Points When Serving
Ukutsala Umntu Wama-Aries
Ukubaluleka kokwenza iRadio efanelekileyo iphose
Iimboniselo ezi-10 eziPhambili zoMdlalo we-2012
10 Iingcebiso ezilula zokunyanga i-Acne yakho ngokwemvelo